အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ ပြောသော လှပမှုဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်များ | ကြည်ဖြူခင်ခင်
အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ ပြောသော လှပမှုဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်များ
အရေပြားဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေဟာ အရေပြားရဲ့အကြောင်းနဲ့ အသားအရေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာကို အသိဆုံးသူတွေပဲနော်။ ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ လှပမှုအကြံပေးချက်တွေ သတိပေးချက်တွေက သင့်အတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိစေမှာပါ။ သင်တို့ သိပြီးသားလေးတွေပါ။ ဒါပေမယ့် သတိပြုလိုက်နာနိုင်အောင် ပြောပြပေးမယ်နော်။
အားကစားနဲ့ တက်ကြွတဲ့လူနေမှုပုံစံကို Miani က အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီး Gracy Goldfaden က အကြံပေးထားပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က တက်ကြွလှုပ်ရှားနေတော့ တစ်ကိုယ်လုံးကို သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေတာပေါ့။ အဲ့ဒီတော့ အရေပြားကို လိုအပ်တဲ့သွေးပမာဏတွေ အမြဲလှည့်ပတ်စီးဆင်းနေပြီး အရေပြားရဲ့လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေ အမြဲရနေတော့ အသားအရေဟာလည်း လှပနေတာပေါ့။
Dr. Goldfaden က တစ်ခု သတိပေးထားပါသေးတယ်။ ဒီအချက်လေးကိုတော့ သူငယ်ချင်းတို့ သိပ်သိအုံးမှာ မဟုတ်ဘူးနော်။ အငန်နဲ့ အချိုတွေကို စားတာများတဲ့အခါ ဆားဓာတ်နဲ့ သကြားဓာတ်တွေဟာ ကော်လာဂျင်တွေမှာသွားကပ်နေပြီး ကော်လာဂျင်တွေကို မြန်မြန် ပျက်စီးစေ ပါတယ်။ ကော်လာဂျင်ဟာ အသားအရေတင်းရင်းပြီး နုပျိုစေလို့ ကော်လာဂျင်တွေကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့ အချိုတွေ အငန်တွေကို ဝေးဝေးက ရှောင်ကြပြီး ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတဲ့ အမျှင်ဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေကို များများစားကြစို့ သူငယ်ချင်းတို့ရေ..။
မျက်မှောင်ကျုံ့ မျက်နှာကြီးတင်းနေမယ်တိုရင်တော့ မျက်နှာနဲ့လည်ပင်းမှာ အရေးအကြောင်းတွေ ထင်ထင်ရှားရှားကြီးကိုပေါ်နေတော့မှာပဲ။ အဲ့ဒီတော့ အလုပ်ကို အာရုံစိုက်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခုခုကို အလိုမကျတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုအချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပါ…. မျက်နှာနဲ့လည်ပင်းတွေက ကြွက်သားတွေ တင်းမနေစေဘဲ ပြေလျော့နေအောင်သတိထားရမယ်နော်။ မဟုတ်ရင် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အရေးအကြောင်းတွေပေါ်ပြီး ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ် အခေါ်ခံနေရမယ်နော်။ ဒါကတော့ Miami နဲ့ New York က အရေပြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Frederic Brandt ရဲ့ သတိပေးချက်ပါပဲ။
Dr. Brandt က သတိပေးထားပါသေးတယ်။ ပြတင်းပေါက်တွေနဲ့ ဝေးဝေးမှာထိုင်ပါတဲ့။ လူတွေက အပြင်ရောက်နေချိန်မှာ နေရောင်ကာကွယ်ဖို့ ထီးဆောင်းတတ်ကြတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထဲမှာ၊ ကားထဲမှာဆိုရင် လုံခြုံပြီလို့ ထင်တတ်ကြတာကိုး။ ပြတင်းပေါက်မှန်ကို ဖြတ်လာတဲ့ နေရောင်ခြည်ဟာ သင့်အသားအရေကို ပိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ကားနဲ့ သွားလာနေရတာများတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်း ကားပြတင်းပေါက်နား ကပ်မထိုင်နဲ့နော်။ တကယ်တော့ Dr ပြောချင်တာက နေရောင်ခြည်ဒဏ်က တတ်နိုင်သလောက် ကာကွယ်ဖို့ပါ။ နေရောင်ခြည်ကြောင့် အသားအရေနေလောင်ပြီး ညိုမည်းနိုင်တဲ့အပြင် ၀က်ခြံ၊ တင်းတိတ်နဲ့ အရေးအကြောင်းတွေလည်း ဖြစ်စေနိုင်တယ်လေ။ အဲဒီတော့ ပြတင်းပေါက်က နေရောင်ကိုလည်း ကာကွယ်ပါ။ အပြင်သွားမယ်ဆိုရင်လည်း နေရောင်ကာလိမ်းဆေး၊ ထီး၊ ဦးထုပ်၊ နေကာမျက်မှန် စတဲ့ လက်နက်တွေ အပြည့်အစုံပါမှ သွားပေတော့နော်။
Dr. Brandt နဲ့ အမြင်ချင်းတူသူကတော့ San Francisco က Kathy Fields ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မနက် ၁၀ နာရီနဲ့ ညနေ ၄ နာရီ အတွင်းမှာ နေရောင်ခြည်နဲ့ တိုက်ရိုက်မထိတွေ့မိပါစေနဲ့လို့ သတိပေးထားပါတယ်နော်။
ညတိုင်း နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်နဲ့ အိပ်ရေး၀၀အိပ်ပါတဲ့။ ဒါမှ ဆဲလ်တွေရဲ့ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုနဲ့ ကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို အားပေးတဲ့ Growth Hormone ဟာ လုံလောက်စွာထွက်ရှိနိုင်မှာပါ။ ဒါမှသာ သူငယ်ချင်းရဲ့အသားအရေလေးက တင်းရင်းပြီး လှပလန်းဆန်းနေမှာလေ။ Dr. Brandt က ပြောပြထားတာပါ။ ညတိုင်း ၁၁ နာရီမထိုးခင် အိပ်ရာဝင်ဖို့ သူကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်။
ဆေးလိပ်က ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မကောင်းဘူးဆိုတာကို လူတိုင်းသိတယ်နော်။ နုနယ်တဲ့ အရေပြားလေးတွေအတွက်တော့ ပိုဆိုးပြီပေါ့။ ဆေးလိပ်က ဓာတုပစ္စည်းတွေက အရေပြားကို သွေးသွားတာကို နှောင့်ယှက်တယ်လေ။ အဲဒီတော့ အရေပြားက လိုအပ်တဲ့အာဟာရလေးတွေ ဘယ်ရတော့မလဲနော့။ ဒီတော့ အရေပြားလေးက တောက်ပစိုပြေမှုမရှိတော့ပဲ မလှမပဖြစ်ရပြီပေါ့။ အရေပြားအတွက် လုံလောက်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်လည်း မရတော့ အရေးအကြောင်းတွေပေါ်ပြီး ရှိရင်းစွဲအသက်ထက် ပိုကြီးရပြီပေါ့။ ဒါကြောင့် Houston က Paul M. Friedman က အကြံပေးထားပါတယ်။ ဆေးလိပ်နဲ့ အဝေးဆုံးမှာ နေပါတဲ့။ ကိုယ်တိုင်လည်း မသောက်နဲ့။ တခြားသူသောက်တဲ့ ဆေးလိပ်ငွေ့ကို ရူမိရင်လည်း တူတူပဲဆိုတော့ ဆေးလိပ်ငွေ့ဆိုရင် ဝေးဝေးကသာ ရှောင်ကြနော်။
မျက်နှာကို မကုတ်ဖဲ့မိအောင် ထိန်းပါ။ အရမ်းနုနယ်တဲ့ မျက်နှာအရေပြားလေးကို ကုတ်ဖဲ့မိမယ်ဆိုရင် အနာဖြစ်ပြီး အမာရွတ်တွေကျန်ခဲ့မှာပေါ့။ ဒါကလည်း သတိထားစရာပါပဲ။ New York က Heidi Waldorf ပြောပြတဲ့ သတိပေးချက်လေးပါနော်။
တကယ်က အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေ ပြောပြတဲ့ အကြံပေးချက်တွေ သတိပေးချက်တွေက အားလုံးသိပြီးသားလေးတွေပဲနော်။ ဒါပေမယ့် သတိထားလိုက်နာမိသူ နဲမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့ သေချာဂရုစိုက်လိုက်နာနိုင်အောင် သတိပေးလိုက်တာပါ။ ရင်နှင်းရဲ့ သူငယ်ချင်းလေးတွေ အမြဲလှပပျော်ရွှင်နေပါစေရှင်..။
(Myanmar Sky Link မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
Posted by ကြည်ဖြူခင်ခင် at 2:28:00 PM
Labels: အလှအပနှင့် ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍများ
Buy LSA Orb Vases online at JohnLewis.com - John Lewis (clipped to polyvore.com)
♥ အရောင်စုံ ငါ့ညနေများ ♥ (1)
၀ါခေါင်လပြည့်ည အမှတ်တရ (1)
cancer အကြောင်း သိကောင်းစရာများ (1)
PH♥T♥ + IMAGES (3)
ကျွန်မ၏ ထူးဆန်းသောအိပ်မက်များ (1)
ကျွန်မလေးစားသော မိန်းမများနှင့် မိန်းမသားတို့၏ အားမာန်များ (3)
ကိုယ့်အတွေးနှင့် ကိုယ်.. :D (1)
ဇွဲကပင်မြေအလှသီကျူးခံစား ရင်တွင်းဖြစ်ကဗျာများ (2)
ညီမလေးအတွက် စာစုများ (1)
မှတ်သားဖွယ်ရာ စကားပုံများနှင့် စကားစုများ (12)
မိုးကို ချစ်သည် (2)
လွတ်လပ်စွာ တွေးပြီး ရေးသည် (3)
လွတ်လပ်ရေးဖခင်အတွက် လွတ်လပ်စွာ ဂုဏ်ပြုသည် (1)
သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတများ (3)
သီတင်းကျွတ် အမှတ်တရညများ (2)
သူငယ်ချင်းများအတွက် ရင်တွင်းဖြစ်ကဗျာများ (2)
အကို(ချမ်းမင်း)ရေးတဲ့ ကျွန်မအတွက် ကဗျာ (1)
အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံများ (1)
အလှအပနှင့် ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍများ (9)
မေမေသို့ လွမ်းချင်း (5)
Violets And Butterflies Plants, Violets And Butterflies Plant Basket -... (clipped to polyvore.com)
ဘလော့ဂ်ဂါအပေါင်း စုဝေးရာ ဥယျာဉ်
ကဗျာ၊ ဆောင်းပါးနှင့် သုတရသစုံလင်ရပ်ဝန်း
BLOG FOR KNOWLEDGES
Country Pumpkin Bouquet: Flower Bouquets - A beautiful keepsake... (clipped to polyvore.com)
Rainbow Rays Potted Gerbera - Yellow Plants, Rainbow Rays Potted... (clipped to polyvore.com)
Simply Elegant Spathiphyllum - Small Plants, Simply Elegant... (clipped to polyvore.com)
Delightful Dieffenbachia Plants, Delightful Dieffenbachia Plant Basket... (clipped to polyvore.com)
f lag s o n g
(c) Copyright 2011 ကြည်ဖြူခင်ခင်. Designed for Dallas Furnished Apartments - Houston Furnished Apartments